सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकको खोइ त विद्यालय प्रति चासो ? – Hamro Abhiyan
सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकको खोइ त विद्यालय प्रति चासो ?
यस वर्षको एसइई परिक्षामा प्रदेश २ को प्रदर्शन कमजोर रहेको देखिएको छ । हुन त शिक्षामा तराईका जिल्लाहरु पछाडी पर्नु कुनै नौलो कुरा होइन । हामी शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारीमा क्रान्ति गर्ने कुरा गर्छाैं । तर नतिजा हेर्दा जहिले पनि पछाडी नै पर्छाै । परिक्षा आएको बेला अभिभावकहरु जुर्मुराए जस्तो गर्नु हुन्छ । तर पछिफेरि पुरानै पारा । वच्चाको पढाइको कुरा ग¥यो की ज्वरो आउने । नेपालको शिक्षा नीतिले गाउँ शिक्षा समिति, शिक्षक–अभिभावक संघ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको माध्यमबाट सार्वजनिक विद्यालयमा अभिभावकहरूलाई संलग्न र सक्रिय गराउने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक उपायहरू अवलम्बन गरेको छ । तर अपवादलाई छाडेर अधिकांश विद्यालयमा अभिभावकहरूको संलग्नता औपचारिकतामा सीमित छ । धेरैजसो विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको आर्थिक र भौतिक पक्षमा मात्र चासो राखेको पाइन्छ । विद्यार्थीको सिकाइ लगायत विद्यालयको शैक्षिक क्रियाकलाप शिक्षक र प्रअको एकाधिकार स्वीकार गरिएको अवस्था छ । एकातिर, विद्यालयहरूले आफ्ना क्रियाकलापमा अभिभावकलाई संलग्न÷सक्रिय गराउन नसकेको अवस्था छ भने अर्का्तिर अभिभावकहरूले पनि स्कूलका गतिविधिमा चाख राखेको पाइँदैन । परिणामतः सार्वजनिक विद्यालय र अभिभावकबीचको दूरी अस्वाभाविक रूपमा फराकिलो रहन पुगेको छ । सके सम्म अभिभावकहरु विद्यालय जान नचाहने र विद्यालयले पनि अभिभावकलाई सवै कुरा जानकारी गराउन नचाहने देखिन्छ । सवैले आ आफनो बच्चा राम्रो होस चाहन्छन तर त्यसको लागि खोई त सयम निकालेको ? खोई त आफनो बालबालिका पढने विद्यालय प्रति चासो दिएको ?
निजी विद्यालयको पढाइ गतिलो हुनुका विभिन्न कारणमध्ये अभिभावकले स्कूलका क्रियाकलाप र छोराछोरीको पढाइमा चासो राख्नु एउटा प्रमुख कारण मानिएको छ । सफल निजी विद्यालय र तिनका विद्यार्थीका अभिभावकबीच छात्रछात्राको पढाइ, व्यक्तित्व विकास र अन्य पक्षबारे रिपोर्ट कार्ड, औपचारिक÷अनौपचारिक छलफल आदिका माध्यमबाट निरन्तर अन्तरक्रिया भइरहेको हुन्छ । विद्यार्थीको सिकाइ र अनुशासनका बारेमा शिक्षक–अभिभावकबीच हुने प्रत्यक्ष संवादले विद्यार्थीको प्रगतिमा सार्थक योगदान गरेको हुन्छ । कतिपय विद्यालयले अभिभावकको सुविधाका लागि विदाको दिन पनि अन्तरक्रिया गर्ने गरेको पाइन्छ । निजिमा विद्यालयमा पढाउने अभिभावकहरु सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा रकम पनि बढी खर्च गर्ने र समय पनि दिने तर सामुदायक भन्ने वितिक्कै समय नदिने हाम्रो सोच कहिले परिवर्तन गर्ने ? आफना बालबालिकाको भविष्यको लागि रात दिन परिश्रम गर्ने तर उनीहरुको शिक्षाको लागि खोई त समय निकालेको ?
अभिभावकले विद्यालयमा रेखदेख गर्ने हो भने धेरै कुरा चम्कउन सकिन्छ । अभिभावकहरू नियमित स्कूल आउने, शिक्षकले पढाए नपढाएको बुझने, अनुपस्थिति शिक्षकसँग स्कूल नआउनुको कारण सोध्ने जस्ता काम हेर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । यसले गर्दा त्यहाँको पठनपाठनमा सुधार आउन सक्छ । सामुदायिक विद्यालयको स्तर उकास्न अभिभावक नै तात्नुपर्ने हुन्छ । अभिभावकले छोराछोरीको पढाइमा बेवास्ता गर्ने हो भने शिक्षक र प्रअको एकोहोरो प्रयत्नले मात्र गतिलो सिकाइ उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । विद्यालयले गरेको हरेक कामको निगरानी अभिभावकको तर्फबाट हुनुपर्छ । आफना बालबालिका विद्यालयमा आएर के कस्ता गतिविधि गरिहेका छन उनको पढाईको प्रगति कस्तो छ हेर्नका लागि आफनो अनुकुल समय मिलाएर विद्यालयको भ्रमण गर्न सकिन्छ । आफनो छोरछोरीको भविष्यको योजना शिक्षकहरुसंग बताउन सकिन्छ तर हामी कहाँ यस्तो चलन छैन । विद्यालयमा बच्चाको भर्ना गर्ने वितिक्कै अभिभावकको जिम्मेवारी पुरा भएको ठान्ने चलन छ । तर यतिले मात्र पुग्दैन । आफनो बच्चाको लागि विद्यालयमा सयम दिनु पर्छ । होईन भने अभिभावकको लगानी बालुवामा पानी हुन सक्छ । यो कुरालाई अभिभावकहरुले बुझ्न सकेको छैन । विद्यालयहरुले पनि अभिभावको विद्यालय प्रति आकर्षण बढाउने कार्यशैली अंगिकार गर्नु पर्छ ।